Mogadishu Journal » Soomaali dil iyo dhaawac loogu geystay Koonfur Afrika
Mjournal :-Kooxo Burcad koonfur Afrikan ah ayaa xalay Gduaha dalkaasi waxaa ay dil iyo dhaawac ugu geysteen laba Dhalinyaro ah oo ka mid ahaa Soomaalida Ganacsi ahaan u tegay dalkaasi Koonfur Afrika.
Kooxaha Burcada ayaa goobtiisa Ganacsi ugu tegay Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu Magacaabi jiray Daahir Ciise C/Nuur,waxana la sheegay in uu u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray rasaas ay ku dhufteen.
Raggii Burcada ahaa ee falkaasi ka dambeeyay ayaa goobta ka baxsaday,hayeeshee majirin wax Hanti ah oo ay ka qaateen sida dhici jirtay markii Burcada ay dilalka geystaan,sida ay sheegeen Wariyeyaal ku sugan dalka Koonfur Afrika.
Dhinaca kale Burcad hubeysan ayaa Xaafada Mayfair ee dalka Koonfur Afrika waxaa ay dhaawac ugu gesyteen Ganacsade Soomaaliyeed,xilli uu ku sugnaa Goobtiisa Ganacsi,kaas oo Magaciisa lagu soo gaabiyay Jeego,waxaana dhaawaciisa la geeyay mid ka mid ah isbitaallada ku yaalla dalkaas.
Todobaadyadii la soo dhaafay ayaa waxaa dalka Koonfur Afrika ka socday dilal iyo boobka hantidooda oo loo geysanayo dadka Ajaanibta ah oo ay Soomaalida ku jiraan,waxaana jiray dagaalo dhexmaray Ciidamada Booliska Koonfur Afrika iyo kooxaha Burcada ah.